ကင်ဆာကြောင့်မသေနိုင်ပါ။ ကင်ဆာကြောင့်မသေနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ဒေါက်တာ Gupta က ပြောတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ သေချာဂရုစိုက်ပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူမှ ကင်ဆာကြောင့် သေစရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့။
ပထမအဆင့်က သကြားလုံးဝ မစားပါနဲ့ ရှောင်ပါ။ အဲဒါကင်ဆာဆဲလ်က အလိုလိုသေသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယအဆင့်က အစာမစားခင်မှာ သံပုရာတစ်လုံးကို ရေနွေးနဲ့ Blend လုပ်ပြီးသောက်ပါ။ ၁လ ကနေ သုံးလခန့် သော်ပေးပါ Maryland College of Medicine ရဲ့ Research အရအဲလိုသောက်ပေးတာက ကင်ဆာဆဲလ်ကို ဓာတ်ကင်ကုသတာထက် အဆတစ်ထောင်ကောင်းတယ်တဲ့ ။
တတိယအဆင့်က အုန်းဆီစစ်စစ် သုံးဇွန်းကို မနက်တစ်ခါ ညတစ်ခါ သောက်ပေးပါ။ ကင်ဆာဆဲလ် အလိုလို ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကုသနည်း နှစ်ခုကို သကြားလုံးဝရှောင်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ဖိုသီဖတ်သီနေရင်တော့ ကင်ဆာဆဲလ်က သင့်ကို အနိုင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။
Dr. Gupta says, No one must die of cancer except out of carelessness; (1). First step is to stop all sugar intake, without sugar in your body, cancer cell would dieanatural death. (2). Second step is to blendawhole lemon fruit withacup of hot water and drink it for about 1-3 months first thing before food and cancer would disappear, research by Maryland College of Medicine says, it’s 1000 times better than chemotherapy. (3). Third step is to drink3spoonfuls of organic coconut oil, morning and night and cancer would disappear, you can choose any of the two therapies after avoiding sugar. Ignorance is no excuse; I have been sharing this information for over5years. Let everyone around you know, it’sasacrilege for anyone this day to die of cancer;. Forwarded as received.